ओली भारत जाने, वार्ता समिति बनाएकोमा भारतद्वारा स्वागत
यसरी बनाउनुहोस् पन्जावी मटन करी(दशै टिप्स)
पार्टीकै विद्यार्थी नेताको उपेन्द्र यादवलाई पत्र ‘अध्यक्षज्यू पार्टीमा भेट हुन छाड्यो !’
'फेस्टिभ मुडमा इन्धन फिभर'
सहनशिल नेपालीको अहिलेको वर्तमान दैनिकी बनेको छ इन्धनको खोजी । सिलिन्डर बोकेर दिनभर लाइनमा बस्न लाखौ नेपाली बाध्य बनेका छन् । ग्यासको अभावमा घरघरमा दाउरा वा कोइला (ब्रिकेट)केा प्रयोग हुन थालेको छ । ...... दक्षिणी सीमा वरपर केाही आफन्त छन् भने गाडीमा ग्यास/तेल पठाइदिन अनुनय विनय गर्न थालेका छन् काठमाडौंवासी । इन्धका लागि घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने युवाको उर्जा मुलुकको विकासमा कसरी प्रयोग होला यो सोचनीय छ । अहिले पनि विद्धत वर्ग देखि योग्य जनशक्ति खाडीमा सस्तो श्रम बेच्न बाध्य छन । यूरोप अमेरिकामा शरणार्थी भएर रहन बाध्य छन् ।
अस्थिर राजनीति र माओवादी द्धन्द्धको कारण मुलुक यसै तीन दशक पछि परेको थियो अहिलेको एक महिना देखिको नाकाबन्दीले फेरि अर्को दशक थप्ने लक्षण देखिएको छ ।
..... १५ बर्ष अघि तत्कालिन जर्मन राजदूत रुडिगर लेम्पले भनेक थिए 'यहाँको राजनीतिको बारेमा म के भनु
यो मुलुकलाई राजनीतिज्ञले होइन पशुपतिनाथले धानेको छ ।'
...... चाडवाडलाई पनि ओझेलमा पार्नेगरि दक्षिणी मित्रले गरेको यो अवस्था प्रति नेपाली युवाहरु भारतीय सोच र उनीहरुको विचारको गरिबीपन बारेमा चिन्ता ब्यक्त गर्न थालेका छन् । विश्वको नेतृत्व गर्ने भनेर हिंडेको भारतले आफ्नो हैसियत देखाएको छ ।
भारतले जति नै समृद्धिको पैरवी गरेपनि उसको ३९ प्रतिशत जनता अझै हातमुख जोर्न सक्ने अवस्था छैनन् । उनीहरु खुला स्थानमा सौच गर्छन् । हाम्रा गरिवीको रेखामुनी रहेकाको अवस्था भन्दा पनि नाजुक अवस्था उनीहरुको छ । तर पनि भारतले सानो छिमेकीप्रति ठूलो हृदय देखाउन सकेको छैन ।
...... भारतले नेपाललाई दिने इन्धन कुनै सहयोग वा दान थिएन । उसले नेपालमा ब्यापार गरेको थियो । त्यसबाट भारतले अर्बौं नाफा नै गरेको थियो । त्यही नाफाको केही प्रतिशत नेपाललाई सहयोग गरेर विकासमा साथ दिएको भन्दै गर्व गर्न सकेको थियो । अहिले सबै कुरा सहतमा आएको छ । भारत विरोधी आवाजहरु सडकमा निकै चर्को छ । ...... डिलक्स केाचमा दशै मान्न घर जाने नेपालीहरु अहिले ट्रकको पछाडी कोच्चिएर जान बाध्य छन् । त्यो पनि घण्टौं कुरेर । उद्योग धन्दा सबै ठप्प छन् । .......
९ हजार बढी कन्टेनर कोलकत्ता बन्दरगाहम अड्किएको छ ।
....... यसमा दोष भारतलाई दिएपनि हाम्रो राजनीतिक सोच र पुस्ताहस्तान्तरणको अभावले यो अवस्था आएकोमा दुईमत भने छैन् । राजनेताको अभाव र भएका नेताले आफूलाई केन्द्रमा राखेर गर्ने राजनीतिले यस्तो समस्या आएकोमा सायदै दुईमत होला । ...... नेपाल भारतलाई अहिले पनि घुमाउरो शैलिमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक हो । भारतको विहारको नराम्रो चामल हामी अहिले किन्छौ भने राम्रो धान अहिले पनि भारत तर्फ वा भारतीय ब्यापारीलाई नेपालमा नै बेच्छौ । ......
२०४५ चैत १० मा पनि भारतले लगाएको नाकाबन्दी खुल्छ खु्ल्छ भन्दा भन्दै १५/१६ महिना नेपाली जनता प्रताडित भएर बस्नु परेको थियो ।
..... कुनै बेला ठूलालाई सानाको अवाश्यक नपर्ला भन्न सकिन्न ..... भारतले त्यो बेलामा मात्र होइन त्यस अघि पनि २०२७ सालमा ब्यापार सम्झौता नबिकरणको विषयलाई लिएर यस्तै नाकाबन्दी लगाएको थियो । ..... त्यतीबेला सम्म नेपालीले नुन समेत भोट (तिब्बत)बाट ल्याएर खान्थे । ..... ०२७ को नाकाबन्दी थाहा पाउनेहरु अहिले वृद्धा अवस्थामा छन भने ०४५ को नाकाबन्दी भोग्नेहरु अधबैसे छन् । नाकाबन्दी शब्द प्रयोग गरे वा नगरे पनि वा प्रकार फरक भएपनि भारतले लगाउने नाकाबन्दी राजनीतिमा नै जोडिएको छ ।
०२७ मा जनता नाकाबन्दीबारे जानकार थिएनन । ०४५ म्ाा पनि शहर बाहेक अन्यत्र असर थिएन तर अहिले यो नाकाबन्दीले नेपाल मात्र हेाइन विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरु र विदेशीलाई समेत असर गरेको छ ।
..... कूटनीतिक पहल गर्न राजनीतिक नेतृत्व बाधक छन् । आफ्नो भविष्यको ख्याल गर्दा गर्दै मुलुकको भविष्य डुवाउन उनीहरु लागि परेका छन् । विकल्पको तयारीमा जुटेका छैनन् ।
०६२/०६३ को परिवर्तन पछि दलका नेताहरुले दरबारको स्थान दिल्लीलाई दिदा समस्या उत्पन्न भएको कतैबाट छिपेको छैन् ।
..... राष्ट्रसंघमा नेपालको मान इज्जत कस्तेा थियो । राजदूत भन्ने पद कस्तो थियो र अहिले के भएको छ । राजदूत भएकाहरु राष्ट्रसंघको जागिरे हुन थाले । ..... नेताहरु आफ्ना तिर लागे राम्रा तिर लागेनन । विचारकहरु स्वतन्त्र देखिएनन सबै दलका नेताको लवेदा समात्ने खालका भए । ....... अन्य मुलुकबाट इन्धन ल्याउने तयारी गरेको थियो । विमानमा इन्धन ल्याएर बाडेको थियो । तर अहिले सरकार भारतले नाकाबन्दी लगाएको भन्न समेत डराई रहेको छ ।
हिन्दु धर्मको प्रचार गर्न नेपाल आउने होम आदि गर्ने विभिन्न बाबाहरु यसमा बोल्न समेत सकेका छैनन ।
...... यो मधेस आन्दोलनको नाममा अहिलेको नाकाबन्दी लामो समय जाने स्पष्ट छ । उनले नेपाल सार्वभौम सम्पन्न मुलुक भएकाले अन्य मुलुकबाट पनि इन्धनको विकल्प खोज्न सक्ने बताएका छन् । ....
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको र भारतीय जना पार्टिको हिन्दु धर्म रक्षामा उस्तै मान्यता छ । जसको कारण थापाको भ्रमण सफल हुने र विरगंज नाका खुल्ने विश्वास धेरैले लिएका थिए । तर त्यो हुन सकेन । .... हिन्दु धर्म आफैका प्रजातान्त्रिक र पुरानो धर्म हो त्यही धर्मको प्रचारक रहेका मोदी अहिले भारतको कार्यकारी प्रमुख छन तर पनि नेपालको समस्यालाई उनले सम्वोधन नगरी 'इगो' लिएर बसेका छन् । उनको 'इगो'लाई भारतको कर्मचारीतन्त्रले उपयोग गरेर समस्या झन असहजता तिर पुर्‍याएका छन् ।
..... नेपालविरुद्ध अमानवीय रुपमा लगाएको अघोषित नाकाबन्दीले हिन्दुस्तानको राजनीतिमा नै ध्रवीकरण आइसकेको छ । जसले गर्दा नेपालमा मामिलामा भारत असफल छ । नेपाल मामिलामा भारत असफल हुँदा यो क्षेत्रमा उसको प्रभाव कम हुने निश्चित छ ।
नेपाल दक्षिण एसिायली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको अध्यक्ष समेत हो ।
यसको सदस्य मुलुकले नेपालको बारेमा बोल्न थालिसकेको छ । तर, नेपाललै अझै त्यसमा आँट गरेको छैन् । ...... नेपालले अन्तराष्ट्रि पत्रिकामा लेखाउने र आफ्नो धारणा राख्ने काम समेत गर्न सकेको छैन । विदेशीहरुलाई भन्न पनि नसकेको अवस्था देखिएको छ । हुनतः कूटनीति भनेको समुन्द्र माथिको कन्चन देखिने पानी हो, जस भित्र विभिन्न कार्यहरु भइरहेको हुन्छ । तर अहिले त्यस्तो पनि लागेको छैन । यही विषयमा नै कलम चलाउने र थोरै त्यसबारेमा जानकारी समेत राखेको कारणले गर्दा पनि भित्री हलचल खासै देखिएको भान गर्न पाएको छैन । ..... कूटनीति भनेकै हासि हासी कसैलाई नर्कसम्म लैजान मनाउन सक्नेकला पनि हो । .....
आफ्ना नातेदार छोरछोरीहरुलाई छात्रबृत्ति, भिसा र परिवार एवं आफ्नो उपचारमा दूतवासमा पुगेर लम्पसार पर्नेहरुकेा कारण पनि यस्तो समस्या थपिएको हो ।
...... थापाको भ्रमणमा देखिएको कूटनीतिक छलफलको बडि ल्याङ्वेजले सकारात्मक सन्देश दिएको भनिएपनि तत्काल देखिने कार्य भने भएको छैन । औपचारिका भ्रमणपछि संयुक्त विज्ञप्ती जारी नहुनु । मोदीदेखि अन्य सबैसंगको भेटमा आन्तरिक मामिला मिलाउन र संविधान संसोधनमा छलफल केन्दि्रत हुनुले तत्काल नाका खुल्न सक्ने देखिदैन । नेपालविज्ञ मानिने प्राध्यापक एसडी मुनीले नेपाली प्रधानमन्त्रीले दिएको नाकाबन्दी खोल्ने दायित्वमा परराष्ट्र मन्त्री थापा असफल भएको बताएका छन् । सरकार बनेको पाँचौ दिनमा नै नाकाबन्दी खोल्ने जिम्मेवारी वोकेर थापा भारत गएका थिए । नेपालसँग जोडिएका भारत व्यापारका ९ नाकामध्ये वीरगन्ज एक्लैले ७० प्रतिशत निर्यातरव्यापार अनुपात ओगटेको नाका खोल्न सहज नभएको सन्देश बोकेर उनी आएका छन् । ..... आफू अघि बढ्न चाहनेले साथमा रहेकालाई लिएर हिड्नसक्नुपर्छ अन्यथा त्यही साथमा रहेकाले छिर्के हान्न सक्छ ।
कण्ठस्थै भन्न सक्छु– माछा, घोंगी या मुसाको प्रकार स्पष्टै बुझ्न सक्छु– हावा, पानी या माटोको आवाज तर पटक्कै बुझ्दिना म– सरकारको भाषा । ...... म रुदल मुसहर आफौ बेठेगानको मान्छे कसरी पत्ता लगाउन सक्छु– सरकारको ठेगाना ! ..... तर आज बुझ्दैछु कि, मैले भत्काउनुपर्ने दूलो त अर्कै रहेछ ! मैले खन्नुपर्ने सुरुङ त अर्कै रहेछ !!
आंदोलनरत मित्रों मे समपिॅत *********************क़िल्लरों से डरकर, नौका पार नहि होतीकोशिश करने वालों कि कभी हार नहि ह...
Posted by Manish Suman on Thursday, October 22, 2015
८५ बर्षीय पिता भोजप्रसाद भट्टराईबाट वडादशैंको टीका ग्रहण!
Posted by Dr. Baburam Bhattarai on Wednesday, October 21, 2015
नाकाबन्दी जारी छ.....
Posted by सदभावना पार्टी on Thursday, October 22, 2015
तेस्रो लिगींको पनि मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीमा एक्यबद्धता
Posted by सदभावना पार्टी on Wednesday, October 21, 2015
Posted by Prashant Jha on Wednesday, October 21, 2015
Retweeted Gagan Thapa (@thapagk):दशैंको उपलक्ष़्यमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना!कष्टमा पनि हाँस्न सक्नु ,अभावमा पनि बाँच्न सक्नु। यो हामी नेपालीको गुण हो। हाँसी खुशी दशैं मनाऔं!
Posted by Dinesh Prasain on Wednesday, October 21, 2015
With my school classmate Ashok Rai, now leader of Sanghiya Samajvadi Party
Posted by Minendra Rijal on Thursday, October 22, 2015
The Economist has an excellent piece on Nepal.
Posted by Prashant Jha on Thursday, October 22, 2015
#Notmyconstitutionपहाडी सत्ताधारीहरुको रणनिति:1.शासक शासितको प्रणाली कायमैराख्न,2.खस ब्राह्मणक्षेत्रीलाई नेपाली मूलका...
Posted by Vijay Kant Karna on Wednesday, October 21, 2015
Posted by Brikhesh Chandra Lal on Wednesday, October 21, 2015
मधेश आन्दोलन रातारात भएको त होइन । मधेशी जनजातिका कुनै माग पुरा गर्नुको सट्टा तीन जना पहाडे कठमुल्लावादी खस राष्ट्रवादी ...
Posted by C.k. Sah on Wednesday, October 21, 2015
With Prakash S Mahat while visiting New York City few years after we both were back for good in Nepal, 2000
Posted by Minendra Rijal on Wednesday, October 21, 2015
By Tamor river with my wife, 1998
वर्षात मधेश में हो तो ,दिल्ली में छाता तानने से कोई फायदा नही -राजेन्द्र महतो ====================================प्रध...
Asavery young child while we still lived in Dharan